Ny Galaxy Watch dia haseho miaraka amin'ny Note 9 ary tsy hitafy Wear OS | Androidsis
Manaova OS eny, Manaova OS tsia. Volana vitsivitsy isika izay nielezan'ny tsaho momba ny smartwatch Samsung manaraka, ilay natao batemy ho Galaxy Watch (izay tsy nantsoina toy izany intsony tamin'ny farany) manome antoka izy ireo fa ny Wear OS no ho rafitra fandidiana izay hitantsika ao anatiny. Nolavina ity fampahalalana ity herinandro vitsy lasa izay, saingy nisy tsaho hafa koa nanondro an'io tranga io.
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny rafitra fiasa mety hitantana ny taranaka vaovao an'ny Galaxy Gear S4 na Galaxy Watch dia manondro fa Wear OS, tsy misy mihitsy. Mbola ho avy indray Tizen ny rafitra fiasa izay ho hitantsika ao amin'ny Galaxy Watch, famantaranandro iray fa raha io loharanom-baovao io ihany, dia haseho miaraka amin'ny Galaxy Note 9. Raha mbola manohy ity tahan'ny famelabelarana ity isika, dia hijanona tsy misy fitaovana ny orinasa Koreana hanatrika ny IFA natao tamin'ny volana septambra.
Ity loharanom-baovao ity ihany koa dia mampahafantatra ny daty misy an'ireo terminal ireo. Araka ny voalaza, Ny Galaxy Watch dia azo atokana manomboka amin'ny 14 Aogositra fa tsy hipaka amin'ny tsena raha tsy amin'ny 24 Aogositra, daty iray hanatanterahan'i Galaxy Note 9 ihany koa.
Samsung miaraka amin'ny faritra Gear S no hany mpanamboatra afaka niatrika ny Apple Watch mahery indrindraMisaotra tsy ny rafitra fandidiana (Tizen) ihany fa ny interface sy ny fahatsoran'ny fampiononana atolotry ny satroboninahitra mihodina izay ahafahantsika mivezivezy amin'ireo menus nefa tsy mila mikasika mivantana ny efijery.
Ny hany mety hitrangan'ny taranaka fara-mandimby Galaxy Gear S amin'ny tsena amin'ny Android Wear, dia izany Google nametraka vola be teo ambony latabatra an'ny Koreana mba hahazoany tambiny amin'ny fampiasana rafitra fiasa izay ankehitriny, ary rehefa avy teny an-tsena nandritra ny taona maro, dia mbola mamela zavatra maro irina, noho ny Google sy ny fahakamoana mahazatra izay asehony amin'ny sasany amin'ireo vokatra vokariny. sy ny rafitra miasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Galaxy Watch dia haseho miaraka amin'ny Note 9 ary tsy hitondra Wear OS